नम्र सानो भेडाको प्रार्थना? वश, हावी र टाई [मायालु हुनुहोस्]
नम्र सानो भेडाको प्रार्थना। सानो भेडा त्यो पशु थियो जुन परमेश्वरले संसारको पापहरू सफा गर्न प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। यो किन हो नम्र भेडाको प्रार्थना यो पवित्र धर्मशास्त्रमा आधारित विश्वासको कार्य हो।
यो प्रार्थना तपाईको आवश्यकताहरुमा निर्भरता धेरै उद्देश्यका साथ गरिन्छ।
यद्यपि सबै भन्दा लोकप्रिय उद्देश्य कसैलाई वशमा राख्नु हो किनकि भेडा नम्रताको प्रतीक हो।
यो जनावरको चरित्रात्मक चरित्रले प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन यसको पेटमा पल्टिएको छ र यसले आफ्नो शान्तिमयतालाई दर्शाउँछ।
अनुरोध गर्दा, यस विशेषतालाई सन्दर्भ बनाइन्छ, विशेष गरी यो अनुरोध गर्नको लागि कि हामी प्रार्थना गरिरहेका व्यक्ति हुन।
1 नम्र भेडाको प्रार्थना
1.1 प्रियको लागि नम्र पाठको प्रार्थना
1.2 प्रार्थना नम्र भेडादेखि पनी, प्रभुत्व र टाई
1.3 दुश्मन हावी गर्न
1.4 प्रमुखका लागि नम्र पाठको प्रार्थना
यद्यपि नम्र भेडालाई जनावरले प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर यो पवित्र छवि हो जुन विश्वासीहरूले तिनीहरूको प्रार्थनाको लागि निर्देशन दिन्छन्।
बाइबलमा पवित्र पाठोलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ सुसमाचार पुस्तक सेन्ट जोनका अनुसार, यसैले यो इसाई शिक्षा को लागी कुनै अनौठो छैन।
यो तपाइँको टाउको माथि छ कि एक आभा संग देखा पर्छ पवित्रताको प्रतीक हो; उहाँसँग एउटा क्रूस छ जुन मानवजातिको उद्धारको लागि आफूले गरेको त्यागको प्रतीक हो र त्यस्तै, सेतो झण्डा जुन पृष्ठभूमिमा देख्न सकिन्छ, शान्तिको प्रतीकको रूपमा देखा पर्दछ।
यो एक चित्रकला हो जसले शान्ति, शान्ति र नम्रता प्रदान गर्दछ।
प्रियको लागि नम्र पाठको प्रार्थना
म तिमीलाई येशू, मरियम र यूसुफको नाममा (तपाईं जसलाई वशमा पार्न चाहानुहुन्छ) व्यक्तिको नाम।
यी शब्दहरूका साथ म तपाईंलाई फेरि कन्ज्युर गर्दछु ... ताकि तपाईं मसँग एक नम्र भेडाको रूपमा आउनुभयो र ममा प्रेम र मेरो ध्यानले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ, परमेश्वरको जीव, म तपाईंलाई केवल मेरो बारेमा सोच्न र यसलाई प्रेमले पूर्ण गर्न चाहन्छु।
म ... (तपाईंको नाम) तपाईं conjure, मेरो मानिस (वा महिला)।
प्रभुत्वको भावनाको नाममा, म ... तपाईंको पाँच इन्द्रियहरू, तपाईंको निर्णय, तपाईंको सोचाइ, र तपाईंको इच्छालाई हावी गर्दछु: ताकि तपाईं ... प्रभुत्वमा रहनुहोस्, मेरो खुट्टामा नम्र रहनुहोस् र पूर्णतया मलाई बाँधेर, दुबैमा भविष्यमा जस्तै वर्तमान।
त्यो जब म ... उसलाई देख्छु उ ... (वा उनले) मलाई देख्दछन्। जब म ... यो सुन्छ ऊ… (वा उनी) मलाई सुन्छ। जब म ... उसलाई हेर्छ उसले ... (वा उनले) मलाई हेर्यो। जब म ... उसलाई छुन्छ उ ... (वा उनले) मलाई छोए।
र जब म ... उस्सा ऊ ... (वा उनी) लामो सास।
त्यसोभए तपाईको पाँच इन्द्रिय, तपाईको दिमाग, अनुभूति र मुटु, सदाको लागि मसँग समान विचारमा बाँधिनेछ। भगवानद्वारा म यसको लागि सोध्छु र स्वभावले नै मलाई यो चाहिन्छ। आमेन
नम्र भेडाले प्रियजनलाई प्रार्थना गर्दा उसको नम्रता शक्ति हुन्छ किनकि हामीले नियन्त्रण गर्न नसक्ने परिस्थितिले गर्दा हामीले गुमाएको शान्ति जोगाउन ऊभन्दा राम्रो कोही छैन।
प्रेममा, यी अधिकतर जटिल परिस्थितिहरू हुन्छन्।
प्रियजन रहन सक्छ त्यस्तो तरिकामा व्यवहार गर्नु जुन सामान्य छैन y त्यसले हाम्रो दिमागलाई शान्त गर्छ। प्रार्थना शक्तिशाली छ र यी अवस्थाहरूमा हामी यसलाई लिन सक्दछौं।
नराम्रो उर्जा पनि घरबाट भाग्छ जहाँ भेडा जहिले दैनिक प्रार्थनामा उपस्थित हुन्छन् र यदि यो सम्पूर्ण परिवारसँग छ भने यो अझ राम्रो हुन्छ।
प्रार्थना नम्र भेडादेखि पनी, प्रभुत्व र टाई
जीत, जीत, जीत।
येशू ख्रीष्ट विजयी हुनुहुन्छ। जसरी यो महान सत्य हो, म जित्दछु ……। येशू ख्रीष्ट क्रूसमा जानुभएको जस्तै मेरो खुट्टामा भेडा झैं नम्र भएर आउने …… का हृदय।
नम्र सानो भेडा जुन तिमी वेदीमा छौ, मेरो शत्रुहरूलाई परास्त गर जो मेरो विरूद्धमा छौ। मेरो हृदय उहाँमा अवतरित होस्, जसरी येशू ख्रीष्टले अवतार लिनुभयो र सेन्ट लाजरसलाई पठाउनुभयो, मृत्यु उसले विजय प्राप्त गर्यो, किनकि मैले यो विश्वासघातक शत्रुलाई पराजित गर्नुपर्‍यो ..... दुईको साथ म तिमीलाई देखाउँछु, तीनद्वारा मैले तिमीलाई समातेर, येशू ख्रीष्टको रगतले मेरो हृदयले तिमीलाई भत्काउनेछ।
म मेरो शत्रु आँखा पट्टी बाँधिएको र हतियार बेकार आएको देख्न।
येशू ख्रीष्टको रगतले मलाई सोधे, र म यो दिदिन। म तपाईंलाई भन्दछु कि महान् प्रभु, तपाईंले मलाई ____________ मा ल्याउनु भयो। कि तपाईंले त्यो मलाई ल्याउनु पर्छ, मेरो खुट्टामा आत्मसमर्पण गर्नु, पराजित हुनु र निरुत्साहित गर्नुः तपाईसँग यसमा विजय हासिल गर्ने शक्ति छ।
यदि केहि सैतान मेरो विरुद्धमा प्रयास गर्नुहोस्, हो ए न्याय ऊ जान्छ, ऊ जित्न सक्दैन। यदि उसले डिफेन्डर्स राख्छ, सबै अस्वीकार गर्दछन्। येशू ख्रीष्ट, तपाईं मेरो साथ भेडा जस्तै हुनुहुन्छ, र तपाईं मेरो उपस्थिति मा हेर्दा सबै बेहोश हुनेछ।
यो विनम्र सानो भेडाको प्रार्थनालाई नियन्त्रण गर्न, प्रभुत्व जमाउन र टाई गर्न धेरै शक्तिशाली छ!
यो प्रार्थना हामीमा खराब विचारहरू र स्वार्थी भावनाहरूबाट टाढा पूर्ण जिम्मेवारीको साथ हुनुपर्दछ।
एक व्यक्तिलाई हावी हुन र टाई राख्नु भनेको स्वार्थ मात्र होइन प्रेमको कार्य हो किनभने धेरै चोटि अर्को व्यक्तिको विचार स्पष्ट हुँदैन र यो प्रार्थना हाम्रो एकमात्र र सब भन्दा शक्तिशाली हतियार बन्छ।
थप रूपमा, यो केवल दम्पतीलाई मात्र अन्य कुनै पनि परिस्थितिमा लागू हुन्छ जहाँ हामीले नियन्त्रण लिनुपर्दछ ताकि चीजहरू नियन्त्रणबाट बाहिर नहोस्।
यद्यपि यस वा अन्य सबै प्रार्थनाहरूको सब भन्दा शक्तिशाली सामग्री भनेको उनीहरूसँग विश्वास गरिएको हो, त्यहाँ कुनै प्रार्थना छैन जुन विश्वासको साथ गरिन्छ जुन उत्तर प्राप्त गर्दैन।
दुश्मन हावी गर्न
तपाईं बेदीमा फेला परेका गौरवशाली नम्र भेडाले मेरो विरुद्धमा भएका सबै शत्रुहरूमाथि विजय हासिल गर्न र मद्दत गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, जसले मेरो हृदयलाई उहाँमा महिमित पार्नुहुन्छ, हाम्रा प्रिय येशू ख्रीष्टको अवतारको रूपमा, संत लाजरसलाई आज्ञाको रूपमा, जसले इच्छालाई जितेको छ मैले मेरो विश्वासघातक दुश्मनलाई जितें, यस पवित्र पलमा म तपाईंलाई हेर्छु, म तपाईंलाई समात्छु र बाँधेर राख्छु, र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टले बगाएको रगतको कारण उनका हृदय भाँचे।
हे मेरो प्यारो बुबा, छोरा र पवित्र आत्मा, तपाईं जो एक साँचो ईश्वर हुनुहुन्छ, मेरो शत्रुलाई मेरो अधीनमा बस्न दिनुहोस् र अझै स्थिर गर्नुहोस्, जस्तो तपाईंको प्रिय छोरो रूखमा गयो।
म मेरो शत्रु आउँदै गरेको उसको कमजोर पाखुरा र आँखामा पट्टी रहेको देख्छु, र यदि उसले तपाईंको धन्यको रगत माग्छ भने, म त्यसलाई कहिल्यै दिनेछैनँ।
म तपाईलाई मेरो महान हार्दिकलाई तपाईसँग आउन आग्रह गर्दछु, पश्चात्तापको साथ र मेरो खुट्टामा आत्मसमर्पण, प्रभुत्व जमाएको, पराजित र तालिम पाएको छु, ताकि तपाईलाई आफ्नो ठूलो शक्ति मार्फत परास्त गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि मेरो शत्रु मेरो विरुद्धमा केही कुरा गर्न आयो भने, मेरो प्रभुलाई हाकिम हुन र उसलाई नदिनुहोस्, यदि उसले मलाई न्याय गर्न चाहन्छ भने, उसलाई हुन सक्ने कुनै पनि रक्षकलाई इन्कार गर्नुहोस्। मेरो सबैभन्दा प्रिय येशू ख्रीष्ट, एक थुमा जस्तो हुनुहुन्छ तिमीहरु ममा हुनेछौ किनकि जब मेरो शत्रुले मेरो उपस्थिति देख्छ, तब म दुष्टतर्फ फर्केर हेर्दछु।
यदि तपाईं दुश्मनहरू हावी गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो सहि नम्र भेडाको प्रार्थना हो।
हाम्रो शान्ति चोर्ने सबै कुरा, जसले हामीलाई चिन्तित गर्दछ, निराश बनाउँछ वा हामीलाई असुरक्षित महसुस गराउँछ परिस्थितिहरू जुन यस प्रार्थनाले हाम्रो इन्द्रिय र आन्तरिक शान्तिको पुनः नियन्त्रण गर्न सक्दछन्।
ती सबैको साथ उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिमा निपुणता प्राप्त गर्दा जसले आफैंलाई हाम्रा शत्रुहरू भनेका छन् ती परिस्थितिको नतिजामा धेरै फरक पार्न सक्दछ।
तिनीहरू हाम्रा शत्रुहरू हुन सक्छन् वा परिवारका सदस्यहरू। यो शक्तिशाली प्रार्थनाले हामीलाई चीजहरू आफैं र सबैको लागि शान्तिमा राख्न मद्दत गर्दछ।
त्यस्तै प्रकारले, ती दुबै नकारात्मक प्रभावहरू जुन हाम्रा शत्रुहरूले घृणा र आक्रोशको माध्यमबाट गुमाउँछन् हाम्रो वरपरबाट टाढा राखिन्छन्।
कुनै पनि नराम्रो प्रभावबाट हाम्रा घरहरू र व्यवसायहरू सफा गर्नु हाम्रा शत्रुहरू वरपर घुम्ने घटनाहरू र निर्णयहरूमा नियन्त्रण कायम राख्ने कुञ्जी हो।
प्रमुखका लागि नम्र पाठको प्रार्थना
यदि तपाईं शान्त र आफ्नो मालिकलाई नियन्त्रण गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं माथिको कुनै पनि वाक्य प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले भर्खर आफ्नो नाम बदल्नु पर्छ।
हाम्रो मालिकहरु कहिलेकाँही हाम्रो जीवन अलि जटिल बनाउन सक्छ।
धेरै जसो केसहरूमा काम छोड्नु भनेको विकल्प मानिनु हुँदैन र यो समयमा यस्तो गर्न सिफारिस गरिन्छ प्रार्थना हाम्रो हाकिमलाई वशमा राख्न र यसैले कामको दबाब कम गर्न।
यी कार्यस्थलहरू प्रायः घर र हामी सबै वातावरणमा महसुस गर्दछौं जहाँ हामी छौं र यो आवश्यक छ कि हामीले आफूलाई यस्ता नराम्रो कम्पनहरूबाट स्वतन्त्र गर्न सक्दछौं किनभने उनीहरूले कुनै व्यक्तिलाई कुनै नोक्सान पुर्‍याउनु अघि।
विश्वास, जिम्मेवारी र सबै राम्रो इरादा कुनै पनि प्रार्थना गर्न हाम्रो ईन्जिन हुनुपर्दछ किनभने हामी मात्र जवाफ चाहिन्छ प्राप्त हुनेछ।
तपाईं सक्नुहुनेछ र सबै प्रार्थनाहरू प्रार्थना गर्नुपर्छ।
महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो नम्र भेडाको प्रार्थना धेरै विश्वासका साथ प्रार्थना गरिएको छ र उनको मुटु भित्र धेरै विश्वास संग।
ऐलको बारेमा सपना